Ndị na-emepụta ihe na ndị na - eweta ngwa ahịa - China Robot Factory
Usoro Axis Robot Anọ Axis Robot Series Anọ axis robot usoro JZJ100B-230 100KG Anọ axis robot usoro JZJ25B-180 25KG Anọ axis robot usoro JZJ15B-140 15KG Brief iwebata nke akpaka njikwa robot: 1. Robot na ebutu robot nwere nnukwu ibu nso si ọtụtụ kilogram ruo ọtụtụ narị kilogram; 2. speedgba ọsọ na-agba ọsọ bụ ngwa ngwa na mgbanwe; 3. Mgbanwe mgbanwe, nwere ike mezue mgbagwoju njikwa na loading na ebutu ọrụ; 4. High pụrụ ịdabere na s ...
Usoro isii nke robot usoro isii usoro robot usoro JZJ50A-270 （100A270） 50KG isii usoro robot usoro JZJ06A-090 6KG isii axis robot usoro JZJ10A-160 10KG isii axis robot usoro JZJ20A-180 20KG Brief iwebata nke akpaka njikwa robot: 1. The loading na ibudata robot nwere nnukwu ibu dị iche iche site na ọtụtụ kilogram ruo ọtụtụ narị kilogram; 2. speedgba ọsọ na-agba ọsọ bụ ngwa ngwa na mgbanwe; 3. Mgbanwe edinam, nwere ike mezue mgbagwoju njikwa na loa ...
Ịgbado ọkụ robot ịgbado ọkụ robot usoro JZJ06C-180 ịgbado ọkụ robot usoro JZJ06C-144 ịgbado ọkụ robot usoro JZJ06C-160 ịgbado ọkụ robot usoro JZJ06C-200 Brief iwebata ịgbado ọkụ robot bụ ulo oru robot aku ịgbado ọkụ (gụnyere ịcha na spraying). Dị ka nkọwa nke nzukọ mba ụwa maka Standardization (ISO) si dị, ụlọ ọrụ robot bụ robot ọkọlọtọ ịgbado ọkụ, ụlọ ọrụ robot bụ ọtụtụ ebumnuche, mmemme a na-emegharị ...